၃၉ ရက်မြောက်နေ့အစီအစဉ် (၂၇ . ၉ . ၂၀၁၆)
(၃၉) ရက်မြောက်နေ့မှတ်တမ်း (၂၇.၉.၂၀၁၆)
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်အတွင်းရှိ မြေလင်းချောင်းကူး ရေကျော် ကွန်ကရစ်တံတားအား ပြန်လည်ပြုပြင် တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
နိုင်ငံတော်အစိုးရသစ်အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဖြစ်သော လမ်း၊ တံတားများနှင့် ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ စျေး စသည့် အဆောက်အအုံများကို ဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိသော ကုမ္ပဏီများအား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းနှင့် မကိုက်ညီပါက အရေးယူခြင်းများကို လုပ်ဆောင်သွားရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲမြို့နယ်နှင့် ဖားဆောင်းမြို့နယ်တို့ကို ဆက်သွယ်ဖောက်လုပ်ထားသော မိုင်းထမ်း – ဝမ်ချယ် – နန့်နောက် – ချိကွဲ့ – စောင်းလော့ – ဝမ်အောင်း လမ်းတွင် ကျန်ရှိနေသေးသော လမ်းပိုင်း ၉ မိုင် ၃.၅ ဖာလုံအား ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
၃၈ ရက်မြောက်နေ့အစီအစဉ် (၂၆ . ၉ . ၂၀၁၆)
(၃၈) ရက်မြောက်နေ့မှတ်တမ်း (၂၆.၉.၂၀၁၆)
ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ အလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)၊ အလယ်တန်းကျောင်း၊ အထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)နှင့် အထက်တန်းကျောင်းများရှိသော ကျေးရွာများတွင် ဆရာ/ဆရာမ နေအိမ်များနှင့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ နေထိုင်ရန် ဘော်ဒါဆောင်များကို နိုင်ငံတော်မှ ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေစကြိုမြို့နယ်ရှိ ပခန်းကြီးရှေးမြို့ဟောင်းရှိ အုတ်မြို့ရိုး၊ ကျုံးနှင့်တကွ ရှေးဟောင်းသာသနိက အဆောက်အအုံကြီးများ၊ ကုန်းဘောင်ခေတ်က ထင်ရှားခဲ့သော ရွှေဥမင်တောရကျောင်းတိုက်တို့ကို ရေရှည်တည်တံ့စေရေးအလို့ငှာ မည်ကဲ့သို့စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းပေးနေသည်ကို သိရှိလိုခြင်းနှင့် မြို့ရိုးဟောင်းကို လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် မြို့ရိုးအပြင်ဘက်မှ ကားလမ်းဖောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း